priyarai, Author at Kavyalaya - काव्यालय
तपाईं टाईम ट्राभलमा विश्वास गर्नुहुन्छ? मचाहिँ थोरबहुत विश्वास गर्छु, आफ्नै दैनिक जीवनमा भइरहने घटनाहरुमा यसको प्रभाव छ जस्तो अनुभूति हुन्छ । विज्ञानले प्रतिपादन गरेको टाइम ट्राभलको मिथक जे भएपनि थट्स्…
by priyarai माघ १८, २०७६
महाशिवरात्री आउँदै छ । मेरो प्रिय भगवानको परम पर्व ! हरेक सालको शिवरात्री आएसँगै त्यहि सालको शिवरात्रीको सम्झना हुन्छ । त्यतिखेर हामी ९ जनाको ग्रुप महाशिवरात्री उतै मनाउने तयारी गरेर…
by priyarai पुस १८, २०७६
म बाल्कोनीमा बसेर चुरोटको अन्तिम खिल्ली सल्काउँदै थिएँ । जाडोमा बाहिर बसेर चुरोट पिउनुको मज्जा सायदैलाई थाहा होला । सामान्य झैँ थियो, रातको त्यो सुनसान वातावरण । एक पफ धुवाँ…